အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အခွန်လွတ်ကုန်စည်များ ဝင်ခွင့်ရရှိနေသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အိန္ဒိယအား အထူးကုန်သွယ်မှုအဆင့် ပေးထားမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဝါရှင်တန်က စီစဉ်နေသည်ဟု BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။အိန္ဒိယသည် ၎င်း၏ဈေးကွက်သို့ အမေရိကန်အား ဝင်ခွင့်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု သမ္မတထရမ့်က ပြောကြားထားသည်။
Wednesday, 06 March 2019 08:04
ထီးခီးလမ်း အဆင့်မြှင့်ရေး ထိုင်းနှင့် မြန်မာ ပူးပေါင်း
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆက်သွယ်ထားသည့် ထီးခီး လမ်းအဆင့်မြှင့်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူတို့ပူးပေါင်းကာ စတင်လေ့လာလျက်ရှိကြောင်း ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဒေါက်တာမြင့်ဆန်းက ပြောသည်။
Wednesday, 06 March 2019 04:28
KOSPA ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏ အစုရှယ်ယာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဝယ်ယူ
တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် SF Holding CO., Ltd. (“SF Holding”) က KOSPA Limited ၏ ရှယ်ယာအသစ်များကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်သည်ဟု Yoma Strategic Holdings Ltd. နှင့် Kokubu Group တို့က ကြေညာသည်။
Friday, 01 March 2019 03:31
DHL ချိတ်ဆက်မှု ကမ္ဘာ့အညွှန်းကိန်း မြန်မာ ၂၃ ဆင့် မြင့်တက်
အမြန်ချောပို့ လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်တဲ့ DHLက ပဉ္စမအကြိမ် DHL Global Connectedness Index (GCI) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပြီး ထုတ်ပြန်ပေးတာဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှု၊ ငွေလုံးငွေရင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ လူများရဲ့ နိုင်ငံတကာ စီးဆင်းမှုဖြင့် တိုင်းတာပါတယ်။
ကား ကို အရစ်ကျဝယ်မယ်ဆို ဘာတွေကို သတိထားရမလဲ?
ကားတစ်စီးကို ဘယ်လို အရစ်ကျဝယ်ကြမလဲ။ ဒီလိုအရစ်ကျဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို သတိထားရမလဲ။ လွယ်လွယ်ကူကူအရစ်ကျ ဝယ်သင့်လား။ အရစ်ကျလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်၊ ကားနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေကို ရောင်းချကြတာပါ။ ဒီအထဲမှာမှ ကားတစ်စီးကို အရစ်ကျဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ ဘာတွေကို သတိထားရမလဲဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Thursday, 28 February 2019 07:04
မိုင်းလားမှဒစ်ဂျစ်တယ်မြို့တော်သစ်Yongbang အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုတာဘာလဲ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thursday, 28 February 2019 03:32
ဗဟိုဘဏ်က တစ်ရက်ကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းခန့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များထံမှ ဝယ်ယူနေသော်လည်း ပြည်တွင်း ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ်အဖြစ် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၁,၅၀၀ အောက်သို့ ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။
Wednesday, 27 February 2019 08:43
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ မြဝတီ - မဲဆောက် အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ဧပြီလပထမပတ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ မြဝတီ - မဲဆောက် အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ဧပြီလပထမပတ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကောင်းချိုပြောကြားချက်အရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင်သိရပါတယ်။
Wednesday, 27 February 2019 06:53
( 27 Feb , 2019 )အောက်ဖော်ပြပါ ဈေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။